Forum Malagasy :: tsy tafiditro intsony ny Mes documents
Forum Malagasy Index du Forum Resaka Hafa INFORMATIKA - INFORMATIQUE tsy tafiditro intsony ny Mes documents
Sujet du message: tsy tafiditro intsony ny Mes documents
Mba mila torohevitra, isaorana mialoha: nanao formatage disk (C) amin'ny PC-ko aho (Win XP Pro), talohan'io dia nadikako tamin'ny partition (D) ny Mes Documents (session misy mot de passe talohan'ny formatage).
Rehefa vita ny formatage sy ny ré-installation Win XP Pro, ka te-hiditra amin'io Mes Documents, io aho dia tsy mety fa voatohina. Inona no fomba ahazoako miditra ao. Misy lalana, sa logiciel ve azo ampiasana amin'izany. Misaotra indrindra an'izay kalaza afaka manome vahaolana mivantana.
Sujet du message: Re: tsy tafiditro intsony ny Mes documents
Zoto92 a écrit:
Miarahaba,Mba mila torohevitra, isaorana mialoha: nanao formatage disk (C) amin'ny PC-ko aho (Win XP Pro), talohan'io dia nadikako tamin'ny partition (D) ny Mes Documents (session misy mot de passe talohan'ny formatage).Rehefa vita ny formatage sy ny ré-installation Win XP Pro, ka te-hiditra amin'io Mes Documents, io aho dia tsy mety fa voatohina. Inona no fomba ahazoako miditra ao. Misy lalana, sa logiciel ve azo ampiasana amin'izany. Misaotra indrindra an'izay kalaza afaka manome vahaolana mivantana.
Miarahaba,Tsy nisy namaly , fa voavahako irery ny olana.
mampiasa Live CD linux (mandriva, ubuntu...) dia voavaky sy azo afindrafindra daholo ny fichier rehetra any anaty windows any.